WAR DEG DEG AH: Puntland oo hadda iskugu yeertay Wariyayasha, kuna dhawaaqay go`aankii ugu adkaa.
February 7, 2020 NEWS 1
BOOSAASO(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa tan iyo shalay kulan deg deg ah la lahaa golihiisa Wasiiradda, waxaana aad looga hadlay arrimaha siyaasada ee kuwajahan dawladda Faderaalka Soomaaliya oo ay isku hayaan arrimaha qaarkood.
Wariyayaasha ayaa looga yeeray Aqalka Madaxtooyada, waxaana la filayaa in ay saxaafadda la hadlaan xubno katirsan golaha Wasiiradda ee Puntland.
Qodobada qaarkood ayaa ah in la hakiyo wada shaqeynta u dhaxaysa dawladda Faderaalka & Puntland, waxaana sidaas oo kale lafilayaa in ay cadeeyaan in ay dib u dhigaan arrimaha wada tashiga qaarkood.
Qaladkii dhacay markii Puntland la unkayay ayaa hadda soo if baxay laakiin weli qummaati loo ma dhaadin in kasta oo la tabay. Qaladkaas oo ahaa in waagaas Puntland la yagleelayay aan weli la isla qeexin iyada lafteedu waxa ay asal ahaan tahay iyo mansabka ay Soomaaliyada guud ku yeelan doonto marka uu dalku dowladnimo taam ah haleelo.
Afar sano ayaan anigu Marqaan News nusqaantan ku soo tabinaayay, aniga oo nalka ku ifinaya qaladkaas aasaasiga ah ee Puntland weli ka xannibayay horusocodkeedii siyaasadeed iyo horumarkeedii guud ee ku mataaneysnaa. Waa isla qaladkaas kan sababay khilaafyada is daba joogay ee beelaha Puntland isku walaaleystay aakhirka kala irdheeyay.
Qaladkaasu waa midka khassab ka yeelaya in iyada oo aan heer qaran ba laga hadlin marka hore la qeexo oo dastuurkeeda na lagu dul qotomiyo martabadda geyigan Puntland isku ahi u khaaska ah ee taariikhdiisa faca weyn salka ku haysa. Puntland la mid ma aha maamul goboleedyada kale sababta oo ah la fac iy fil toona ma aha. Ilaa ay iyadu maqaamkeeda soojireenka ahaa garato oo ay iskugu caleema saarto abidkeed Puntland dowladda qaran is ma fahmi doonaan.
Waxaa na la arki lahaa sida dhakhsaha leh ee ay khilaafyada beelaha Puntland kala irdheeyay u libdhi lahaayeen oo iskuduubnidii lagu aasaasay toos dib ugu curan lahayd.